पुश सूचना विज्ञापन नेटवर्क - CASE अध्ययन 01
केस अध्ययन ०१
यहाँ हाम्रो एक विज्ञापनदाताबाट केस स्टडी छ, जसले हाम्रो पुश सूचना विज्ञापन ढाँचा प्रयोग गर्थे।
सूचना विज्ञापन पुश गर्नुहोस्
टियर २ जिओको
१० रचनात्मक बनाइयो
सीपीसी: 0.0161 ००१XNUMX१
२ दिन पुरानो अभियान
निगरानी र अतिरिक्त ट्युनिंग।
फ्रुगी विज्ञापनहरूमा पुश विज्ञापनहरू सीपीसी (लागत-प्रति-क्लिक) मूल्य निर्धारण मोडेलमा काम गर्दछ। तपाईं मात्र तिर्नुहुन्छ जब प्रयोगकर्ताले तपाईंको विज्ञापन मार्फत क्लिक गर्दछ। केवल on ०.००0.003 मा जिओमा निर्भर गर्दै बिडिंग सुरू गर्नुहोस्।
मलाई अब साइन अप गर्नुहोस्
पुश विज्ञापनहरू नयाँ प्रकारको नेटिभ विज्ञापन ढाँचा हो, विज्ञापनदातालाई पुन: जडान गर्न र उनीहरूको दर्शकहरूलाई विस्तार गर्न एक गैर-घुसपैठ, प्रयोगकर्ता-मैत्री र अत्यधिक-आकर्षक तरीका प्रदान गर्दछ। लगभग कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन अभियानहरूका लागि असाधारण रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै, यी अन्तर्क्रियात्मक विज्ञापन सन्देशहरू सीधा प्रयोगकर्ताको मोबाइल वा डेस्कटप उपकरणमा कुनै पनि समय, कही पनि डेलिभर गरिन्छ!
तपाईंले वेब पुश सूचनाहरू किन प्रयोग गर्नुपर्छ?
वेब पुश सूचनाहरू ती क्लिक गर्न योग्य सन्देशहरू हुन् जुन तपाईंको डेस्कटप, मोबाइल वा ट्याब्लेटमा देखा पर्दछ जब तपाईं अनलाइन हुनुहुन्न। यी सन्देशहरू वास्तविक समयमा डेलिभर हुन्छन् र अब मार्केटर्स द्वारा प्रभावकारी सञ्चारको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि यसले १००X अधिक CTR पठाउँदछ जब ईमेलको तुलनामा।
वेब पुश सूचनाहरू प्रयोग गर्ने धेरै फाइदाहरू छन्। यसले सीटीआर बढाउँछ, ग्राहकको संलग्नतालाई बढावा दिन्छ, सदस्यता लिन सजिलो, गोपनीयता कायम राख्दछ, कम समय र अधिक खपत गर्दछ। पुश सूचनाहरू अब सञ्चारको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने माध्यम बन्न पुगेको छ। ठिक छ, मुख्य कारण ईमेलमा यसको फाइदाहरू बाहेक केही छैन। ईमेलको लागि अप्ट-इन दर%% -१०% हो जबकि वेब पुश सूचनाको लागि यो १०% -5% हो। र क्लिक-थ्रु रेटलाई विचार गर्दै, यो ईमेलका लागि%% -10% छ भने वेब पुश सूचनाहरूको लागि 10०% सम्ममा छ।
यदि तपाइँ वेब पुश सूचना उद्योग अनुसार उपयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईले देख्नुहुनेछ कि ईकामर्स उद्योगले २१% प्रयोग गर्दछ। फेसन उद्योगले यसलाई अधिक (लगभग nearly०%) प्रयोग गर्दछ। मिडिया / ब्लगमा वेब पुश सूचना प्रयोग १%% छ जसमध्ये% 21% ब्रेकिंग न्यूज पठाउन प्रयोग गरिएको छ। %% भर्खरका छविहरू, भिडियोहरू आदि पठाउन प्रयोग गरिन्छ।
जब यो वेब पुश सूचनाहरूको उद्योग अनुसारको प्रयोगको कुरा आउँछ, हामी देख्न सक्छौं कि प्रत्येक उद्योगले आफ्नो बिक्री र स boo्लग्नता बढाउन विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्दछ।
पुश विज्ञापनहरू: रूपान्तरण गर्ने पुश विज्ञापनहरू कसरी सिर्जना गर्ने (कृपया यसलाई पढ्नुहोस्)
हाम्रो पुश विज्ञापन सामग्री नीति
भाग्यमानीमा भाग्नुहोस् पुश
मसँग खाता छैन, मलाई साइन अप गर्नुहोस्!
मेजलोभनेट १,,14,8381१ सम्म,